Mahazo haingam-pandeha i Evernote miaraka amin'ny kinova vaovao | Vaovao IPhone
Alvaro Fuentes | | Fampiharana iPhone, maro
Tamin'ny fikatsahany ny hahatonga ny tsirairay ho voarindra sy hamokatra kokoa, ny firaketana an-tsoratra malaza Evernote dia tsy niraharaha ireo zava-dehibe vitsivitsy. Ny hafainganam-pandehan'ny fampiharana, na ny tsy fahampiana azy, dia singa iraisana amin'ny hevitry ny mpampiasa. Vao namoaka rindrambaiko iOS nohavaozina indray i Evernote izay mikendry ny hamahana ireo fitarainana ireo, ary koa hanamora ny famerenana ny fanamarihanao.
Ny zavatra voalohany ho tsikaritranao rehefa manomboka mampiasa ny Evernote kinova 8.0 ianao dia ny efijery an-trano vaovao izay mampiseho izay nataonao teo aloha teo amin'ny toerana nijanonanao, miaraka amin'ireo naoty farany nataonao. Ny topi-maso mialoha dia mamela anao hahita izay naoty manana votoaty marobe ary izay misy lahatsoratra ihany. Ho fanampin'izany, ny bara fitetezana vaovao miraikitra amin'ny faran'ny fampiharana dia manamarika ihany koa, izay ahafahanao mitsambikina avy amin'ny naoty iray mankany amin'ny iray hafa, mikaroka, mijery ireo hitsin-dàlana, na mijery ny kaontinao. Sariohatra maitso iray hafa eo afovoan'ny bara fisakafoanana vaovao dia mamela anao hanomboka fanamarihana vaovao avy hatrany ary ny fanindriana lava eo amin'io kisary io dia ahafahanao misosa maka sary na feo, na manampy fampahatsiahivana.
Fampisehoana vaovao ho an'ny mpampiasa Evernote Business ahafahanao manasaraka ny fanamarihanao manokana amin'ny taratasinao. Ity dia zavatra iray izay "mandrindra be tokoa ireo toe-javatra iainan'ny orinasa ireo ka ahafahana miditra mora foana," hoy i Nate Fortin, filoha lefitra misahana ny famolavolana ao amin'ny Evernote. Ankoatr'izay dia nambarany koa fa: "Tianay ny olona handany fotoana bebe kokoa amin'ny fitetezana zavatra betsaka kokoa amin'ny fanaovana zavatra." Tsindrio lava fotsiny ny kisary kaonty mba hivadika eo amin'ny kaontinao sy ny kaontinao manokana.
Ny famorianao dia hiaina eo an-tampon'ny efijery fampiharana ary azonao atao ny manivana azy ireo amin'ny alàlan'ny tag izay ampiasaina hamantarana ireo naotinao. Ny endri-pikarohana maherin'i Evernote dia nanjary haingana sy matanjaka kokoa tamin'ity famotsorana ity, hoy i Fortin.
Ary ny fanatsarana natao tao ambadiky ny sehatra Evernote izay mety ho zava-dehibe kokoa noho ny famolavolana (izay fanatsarana lehibe amin'ny fisehoan'i Evernote ankehitriny). Eric Wrobel, mpanatanteraka mpanatanteraka ao amin'ny Evernote, dia nilaza fa ny rindrambaiko iray manontolo dia nosoratana indray avy any aoriana, ary nitondra fiakarana hafainganam-pandeha marobe izany, anisan'izany ny fanovana haingana kokoa. Amin'ny fampitahana ny kinova 7.0 ankehitriny sy ny 8.0 vaovao, ny fahasamihafana eo amin'ny lafiny hafainganam-pandeha eo anelanelan'ny iray sy ny iray hafa dia tena miharihary.
Ny fifaninanana ho an'ny naotinao
Evernote no hany safidy tokana tamin'ny fandraisana an-tsoratra ny zava-drehetra nanomboka tamin'ny fitantanana asa tsotra ka hatramin'ny tetikasa sarotra, saingy ankehitriny dia manana fifaninanana matotra ilay fampiharana malaza. Ny Microsoft's OneNote sy Google Keep dia safidy malaza miaraka amin'ny serivisy miaraka amin'ireo serivisy hafa avy amin'ireo orinasa ireo ihany. Ny fampiharana fakana an-tsoratra an'i Apple dia nanjary nahasoa kokoa tamin'ny fisehoan-javatra vaovao, ary ny fampiharana maivana sy programa maivana toa ny Simplenote dia nanamora kokoa ny fanamarihana mifanohitra amin'ny Evernote izay nanisy sosona maromaro. Antony iray ihany koa ny vidiny, na dia manome kinova maimaimpoana voafetra aza i Evernote.
Ny lazan'ny Evernote dia nalaza tamin'ny volana lasa teo rehefa avy nanao lohateny hoe fanovana ny politikany momba ny tsiambaratelo izay nampiharihary fa afaka naka ny naotiny isaky ny naniry izy ireo. Nanaitra ireo mpampiasa ny vaovao, na dia nanazava haingana aza ny Evernote fa ny injenierany dia mampiasa note fotsiny mba hanatsarana ny fahaizan'ny machine machine fampiharana ary tsy manana fahalalana momba ny atin'ny naoty.
Mazava ho azy fa maro ny safidy raha ny momba ny fangatahana fanamarihana, saingy ny mazava dia izao, miaraka amin'ny fanavaozana ny Evernote, dia mitombo ny fifaninanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mahazo haingam-pandeha i Evernote miaraka amin'ny kinova vaovao
John_Doe dia hoy izy:
Eny, saingy mbola faritan'izy ireo ho roa ihany ny isan'ireo fitaovana.
Ary tsy manolotra zava-baovao ampy handinihana ilay boaty izy ireo.
Mamaly an'i John_Doe